Apple Watch inobatsira kugadzirisa mhosva | Ndinobva mac
That the Apple Watch yave chishongedzo Kuti mamirioni avanhu vanoipfeka zuva rega rega hazvisi zvakavanzika zvemunhu uye ndezvekuti kunyangwe muzvirongwa zvepa terevhizheni uye nhepfenyuro tinogona kuona mashandisiro anoita vatambi kana varatidziri panguva yekurekodha. Zvakadaro Hatina kumbofungidzira kuti mapurisa anogona kushandisa ruzivo kubva kuApple Watch kugadzirisa nyaya yemapurisa.
Mukadzi weAustralia akaudza mapurisa kuti vamwene vake vakaurayiwa mumba mavo nevanhu vasingazivikanwe, Asi ruzivo kubva kune akarwiswa neApple Watch runopesana neuchapupu ihwohwo, zvichichinja kuferefetwa kwese kuita kusingatarisirike.
Apple Watch inoteedzera kurova kwemoyo wemushandisi. Izvi zvinoreva kuti inoziva chaizvo panomira moyo, izvo zvakatendera mapurisa eAdelaide kuti azive chaizvo pakaitika kuponda uku uye zvinoita kunge kwakaitika kare kupfuura zvazvakataurwa pakutanga.
Caroline Nilsson, muroora wemushakabvu, anoti vamwe varume vari mumotokari yemotokari vakaita nharo naMyrna Nilsson kumba kwake ndokubva vamuuraya.
Varume vakasunga gotwe, Muzvare Nilsson, ndokubva panzvimbo iyi. Muvakidzani akawana mukadzi achidzedzereka muchivanze, achiri akavharika, kuma10 masikati muchuchisi weAdelaide, Carmen Matteo anoti data kubva kune akangwara smart wachi inoratidza kuti Myrna Nilsson akaurayiwa kare, achangodzoka kumba achibva kubasa.
Wachi yakadaro ... ine ma sensors anokwanisa kuteedzera kufamba uye nekumhanya kwekufamba kweanopfeka uye inochengetedza nhoroondo yezvinoitwa nemuridzi wezuva nezuva. Iyo zvakare inoyera kuyerwa kwemoyo. Mushakabvu anofanira kunge akarwiswa nguva dza6: 38 masikati uye pasina mubvunzo angadai akafa na6: 45pm Uyu mumiririri haana kuona kuti mapurisa aizokwanisa kuziva nguva yekufa uye nerumwe ruzivo kubva muchinhu ichocho.
Mapurisa havaise mhosva yavo yekuponda kuna Caroline Nilsson chete pane idzi data uye ndezvekuti vavakidzani havana kuona SUV mumba, uye havana kunzwa nharo. Iko hakuna zvakare humbowo hweDNA hunotsigira kutaura kwekuti varume vasingazivikanwe vakarwisa Myrna Nilsson. Ino haisi nguva chete iyo chishandiso cheApple chinoshandiswa nemunhu akabatwa chakashandiswa mukuferefetwa kwematsotsi.
Mapurisa anogara achishandisa minwe yevanhu vakafa kuvhura maPhones vachitsvaga humbowo, semuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inobatsira kugadzirisa mhosva
Takura yako HomePod pasina kukuvadza yayo yekunze machira mesh